यस्तो छ तपाईको फाल्गुन ३ गते सोमबारको भाग्य, पशुपतिनाथको दर्शन गर्दै राशीफल हेर्नुहोस् । - Nepal Times Online
यस्तो छ तपाईको फाल्गुन ३ गते सोमबारको भाग्य, पशुपतिनाथको दर्शन गर्दै राशीफल हेर्नुहोस् ।
Posted on February 14, 2021 February 14, 2021 Author USER-1	Comment(0)
मेषः मान्यजनहरुसँगको सम्बन्धमा सामान्य ति क्त ता उत्पन हुन सक्नेछ । सामान्य कार्यमा अधिक श्रम खर्चनु पर्ने समय रहेकोछ ।पूराना मित्रजनहरु सँगको भेटघाटले मन प्रशन्न रहनेछ । सवारीसाधनको प्रयोगमा बिशेष साबधानि अपनाउनु पर्नेछ । पारीवारिक झमेलाले सताउन सक्नेछ ।
बृषः आय आर्जनका निम्ती अधिक श्रम तथा यात्रा गर्नु पर्ने समय रहेकोछ । मित्रजन तथा दाजुभाई बिचको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ ।मान्यजन हरुको साथ सहयोग मनग्य प्राप्तहुनेछ । मान प्रतिष्ठामा सामान्य आच आउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । यात्राका क्रममा सामान्य त ना ब उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
मिथुनः भोजभतेर तथा सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त हुनेछ । रचनात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहनाले मन प्रशन्न रहनेछ ।बाणीमा अस्थीरता छाउनाले नजिकका आफन्तजनहरु सगँको सम्बन्धमा तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ ।
कर्कटः मनोबिलासिताका साधनको प्रयोगले समय ब्यतित रहनेछ । ब्यपार ब्यवसायका क्षेत्रमा समय उत्तम रहेकोछ । स्वास्थ क्षेत्रमा सामान्य सुधार रहनेछ ।रोकिएर रहेका कार्य सम्पादित हुनाले मन प्रशन्न रहला । पारीवारिक साथ सहयोगमा अधुराकार्यहरु सम्पादित रहनेछन् । अध्ययन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ ।
सिंहः कार्य सम्पादन प्रति अरुको दबावको महसुस हुनाले दिन त ना ब पूर्ण ब्यतित रहला । प्रतिष्पर्धीहरु सवल रहनाले हर कदममा सजग रहनु होला ।स्वास्थमा देखिएको समस्याका कारण सामान्य खर्चको योग रहेकोछ । परीवारका सदस्यहरु बाट टाढा भएको महसुस रहनेछ । गैर ब्यक्तिहरुको बिश्वासमा नपर्नु होला ।
कन्याः आय आर्जनका बिभिन्न श्रोत साधनहरु फेला परेतापनि मानसिक चन्चलताले कार्य श्रेत्रमा ब्यवधान आई पर्नेछ । अध्ययन अध्यानपनमा अधिक समय ब्यतित गर्नु पर्नेछ ।रचनात्मक कार्यका क्षेत्रमा समय ब्यतित गर्दा उत्तम प्रतिफल प्राप्त रहनेछ । बोलिका कारण आफन्तजनहरुसँग त ना ब उत्पन्न हुनेछ ।
तुलाः सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहगायीता साथै सामान्य मान प्रतिष्ठा प्राप्तीको योग रहेकोछ । कार्यप्रतिको लगन सिलतामा बृद्धि हुनेछ । मनोरञ्जनका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भावना रहेकोछ ।मानसिक चन्चलताले सताउनेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहला । नयाँ कार्य थालनिमा साबधान अपनाउनु होला ।
बृश्चिकः यात्राका क्रममा सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । तपाइको कार्यसम्पादनको श्रेय गैर ब्यतित्वहरुले प्राप्त गर्नेछन् । नजिकका मित्रजनहरुसँगको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुनेछ ।भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । परिवारका सदस्यहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य मन मुटाब उत्पन्न हुनेछ ।
धनुः स्वास्थ सम्बन्धी समस्याका कारण सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । कार्य क्षेत्रमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । खानपानका क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु होला ।पुरानो लगानि उठाउन समयले साथ दिनेछ । गैर ब्यक्तित्वहरुका कारण कार्य क्षेत्रमा सामान्य दवावको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना रहनेछ ।
मकरः शारीरिक आलस्यताका कारण गरीरहेको कार्यमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य खराबी उत्पन्न हुन सक्नेछ ।मान प्रतिष्ठामा सामान्य आँच आउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा मनग्य लाभ प्राप्त रहनेछ । अध्ययन अध्यापन मध्यम रहनेछ ।
कुम्भः तपाईद्वारा सम्पादित कार्यमा त्रुटि देखाउनेहरुको बृद्धि हुनेछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । अनावश्यक खर्चको सम्भाबना रहेकोछ ।गैर ब्यक्तिहरुको बिश्वासमा नपर्नुनै उत्तम रहनेछ । यात्रामा सामान्य झन्झट आईपर्न सक्नेछ । सामाजीक कार्यका क्षेत्रमा जुट्ने बिशेष समय रहेकोछ ।
मीनः बौद्धिक ब्यत्तित्वहरुको साथ सहयोगमा दीर्धकालिन आम्दानिका श्रोतहरु फेला पर्नेछन् । अध्ययन अध्यापनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ ।रचनात्मक तथा कला कौशलका क्षेत्रबाट सामान्य आम्दानि लिन सकिनेछ । स्वास्थका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना समेत रहेकोछ । स्वास्थमा सामान्य सुधारको योग रहेकोछ ।
परदेशी को आत्म कथा ।
Posted on February 1, 2021 February 1, 2021 Author USER-1
बाहिर हुँदा समय मिलेन । बाकस भित्रबाटै लेखेँ आमा चिठी, समय आउनु अगावै नै भोगेँ आमा मैले बेथिति । परदेश मै बस्यो आत्मा मेरो आमा, हावालाई नै सास सम्झनु सास र सम्पतिको त के कुरा गर्नु आमा, बाकसभित्र लास सडेको मैनौँ भइसक्यो । सपनाको ठूलै पोको फुकाउन परदेश पुगेँ आमा, घर फर्कंदा बाकस भित्रको प्याकिङमा […]
प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीको प्रमुख आतिथ्यमा ४२ औं पर्यटक प्रहरी दिवस सम्पन्न ।
काठमाडौं, २०७७ माघ १२ गते प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीको प्रमुख आतिथ्यमा “४२औं पर्यटक प्रहरी दिवस, २०७७” नेपाल पर्यटन बोर्ड भृकुटीमण्डपमा सोमबार आयोजित एक समारोहबीच सम्पन्न भएको छ ।समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीले पर्यटक प्रहरीलाई व्यवसायिक रुपमा सहयोग गर्नुहुने विभिन्न संघ संस्था तथा पर्यटन व्यवसायी तथा उत्कृष्ट प्रहरी अधिकृतहरुलाई सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभयो । उक्त अवसरमा […]
निःशुल्क कोरोना खोप ! २ दिनको यात्रा, लाउन १० हजार खर्च !
Posted on February 2, 2021 February 2, 2021 Author USER-1
म्याग्दी, २० माघ । यहाँको धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जाबाट पैदल तथा सवारीसाधनमा दुई दिनको यात्रा गरी स्थानीय महिला स्वयंसेविका विष्णुमाया छन्त्याल कोभिसिल्ड नामक खोप लाउन बेनी अस्पतालमा आइपुगिन् । जिल्लाको अति विकट तथा दुर्गम गाउँ गुर्जामा १८ वर्षदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छन्त्यालले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमबाट बच्न सरकारले उपलब्ध गराएको खोप लगाउन पाउँदा निकै खुसी […]
खुशीको खबर : अब वृद्धाभत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिइने,हेर्नुहोस घरमा बसीबसी पैसा बुझ्न पाइने !
आफ्नै बहिनि सौता हाल्दा मैले माफी दिए अहिले मलाई कु टेर अर्काको श्रीमती लिएर भागे | म के गरु (भिडियो)
नेपालमा यदि कोहि सबैभन्दा बढि भ्रष्ट छ भने ती हुन नारायाणकाजि श्रेष्ठ -सुरेन्द्र के.सि. (भिडियो सहित)
Posted on December 13, 2020 December 13, 2020 Author USER-1
दुखद खबर प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई तत्काल १६ वर्षमा पेन्सन पाउने गरी नियमावली नबन्ने ।
बुटवलमा हेर्नुहोस त । कतार भएका सोझा श्रीमानलाई नमज्जैले फसाइन।श्रीमती3जना केटा सँँग नेपालमा मोज (पुरा भिडियो हेर्नुहोला)
Posted on February 8, 2021 February 8, 2021 Author USER-1
यौन सम्बन्ध उत्कृष्ठ बनाउनुहोस धनी हुने सबैभन्दा सजिलो तरिका ।
Posted on January 30, 2021 January 30, 2021 Author USER-1
पोखराको पृथ्विनारायण क्याम्पसमा पढ्दै आएकी सबिता आचार्य यति बेला सर्पको उद्दारमा ।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख बस्न्यातको राजसी ठाँट : सोफामा सुनको जलप ( भिडियो )
Posted on December 11, 2020 December 11, 2020 Author USER-1